Iyo Yemahara Software Foundation Chipo Chinyorwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Yemahara Software Foundation yezvipo runyorwa inosanganisira kabhuku ine yemahara software uye Hardware zvikamu.
Kupera kwegore mhemberero dzave kusvika. Uye, senguva dzose iyo Yemahara Software Foundation kubudisa yako yekukurudzira runyorwa yezvigadzirwa zvinosangana nezvinotsanangurwa. Dai iwe uri mukomana akanaka uye usina kushandisa zvigadzirwa zvemidziyo, izvi ndizvo zvaunogona kuwana pasi pemuti
1 Urwu ndirwo runyorwa rwezvipo
1.3 Zvimwe zvinoshandiswa
Urwu ndirwo runyorwa rwezvipo
Iyo runyorwa peji inotanga pamwe nekurudziro:
Pakusarudza chipo gore rino, tinokukurudzira kuti ufunge zvakanaka nezve sarudzo yauri kuita. Ndiye akangwara mubatsiri akangwara zvakakwana kana kuremekedza kodzero yeshamwari yako kana yemhuri? Hwendefa iro rine pfungwa here chii chakanyanya kuvanakira? Kana icho chigadzirwa chinopenya chine mutengo wakakwira zvakanyanya kupfuura mutengo wawo?
Ipapo zvinotiyeuchidza kuti:
Patinotendera pane software yekambani yakagadzirwa ne Facebook, Amazon, Apple, Google, uye mamwe makambani asingaverengeki kutarisira mabasa edu basic computer sainzi, tinoisa simba rakakura kwazvo mumaoko ako, simba ravanoshandisa vakasununguka. Chete nekushandisa yemahara software, uye zvishandiso zvinoshandisa yemahara software, ndipo patinogona kudzokazve simba iri.
Yekutanga yezvigadzirwa ichafanirwa kumirira kusvika gore rinouya. Zvayo ndezve Kuchena Librem 5, izvo vamwe vangu vakataura zvakawanda nezvazvo pa blog.
Iyi foni inouya ne Linux-based operating system uye switch dzemuviri maikorofoni, GPS, uye neWi-Fi kubatana, Chero zvazvingaitika, zvinojekeswa kuti iyo microprocessor inotungamira yekufona kutaurirana ine software yekambani. Inokurudzirwa kuidzima kana usiri kufona kana kutumira mameseji.
Sarudzo yechipiri iyo iyo yezvinyorwa zvinyorwa inotipa isu mune yeefoni chikamu chikamu cheGlass S3 iyo inoshanda system yashandurwa. Panzvimbo pemukuru anouya ne musiyano we Android unonzi Replicant. Kana iri yekushandisa chitoro ndeye F-Droid iyo inosanganisira chete yemahara software.
Zvisinei, zvinoonekwa kuti eIyo processor inotungamira kwekutaurirana inosanganisira yekudyara software.
Kekutanga nguva yandakanyora nezve iyi runyorwa, ndakanyunyuta kuti yaive nezvigadzirwa zvakagadzirwa zveWindows izvo zvine system yekushandura yakachinja nekudzvinyirira kugona kwayo. Kubva panguva iyoyo kusvika zvino, huwandu hwehardware neLinux kubva pakutanga hwawedzera zvakanyanya.
Kupihwa maererano nemabhuku ekunyorera ndiyo X200, inoshanduka yekumisikidza komputa inoshandisa Libreboot yekubhaiza, uye kugoverwa kweLinux isina zvivakwa zveTrisquel zvinhu.
Kana iwe uchitsvaga komputa desktop, unogona kutarisa iyo Vikings D8. Inotsanangurwa sekombuta yedesktop yakasimba inogona kuva wedzera kana kudzikisira zvinoenderana nezvaunoda, uye izvo zvinokwanisa kuita zveseKubva pane yakapusa webhu kubhurawuza uye vhidhiyo kutamba kune zvimwe zvinoda mabasa senge kunyora kodhi.
Izvo zvitoro zvinotengesa zvinokupa iwe mukana we sarudza marongero akasiyanas uye iwe unogona kusarudza iyo yambotaurwa Trisquel sisitimu yekushandisa kana imwe yezvimwe zvinogoverwa zveLinux izvo zvisingasanganisi zvemidziyo yezvinhu.
NeuG USB Yechokwadi Random Number jenareta: Iyo microcomputer ine usb chinongedzo chinogadzira zvisina kujairika manhamba. Dhizaini yayo yemahara yakasununguka zvachose uye mhedzisiro yacho ine entropy yepamusoro kupfuura mamwe ma software.
Mini WiFi Adapter: Iyo yakanaka mini Wi-Fi adapter yekushandisa panzvimbo yezvinhu zvehardware zvinoda madhiraivha eimba.
Yakareba Range Wi-Fi Adapter: Iyo ine simba kudarika yapfuura uye inogona kuitwa kunyangwe ine simba nekuchinja kanyanga. Uye zvakare, iyo kanyanga inogona kutenderera munzira ipi neipi
VPN Router: Yakagadzirirwa kushandiswa neiri router yatove nayo. Inotipa netiweki yakazvimiririra yepamhepo inovandudza zvakavanzika uye chengetedzo uye inobvumidza kupfuura netiweki kutonga.
Zvakare, kana iwe usiri kuda kupa Hardware, in peji iwe unowana akawanda marinki emabhuku asina DRM, mavhidhiyo uye discs.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo Yemahara Software Foundation Chipo Chinyorwa
Super Linux. Ndiri kuda kuishandisa mune zvese zviitiko zvangu